Maxeey ka cabanayaan Soomaalida caafimaadka u doonta dalka Hindiya.? | YoobsanNews.com
Muqdisho [Yoobsannews Online] Soomaalida u taga magaalooyinka dalka Hindiya baaritaanada dhanka caafimaadka ah ayaa ka cabanaya qaar ka mid ah ardayda Soomaalida ah ee wax ka barata dalkaasi , waxaanna cabashadooda ku saleysan tahay in dhalinyarada oo ay u kaxeystaan si ay dhaqaatiirta uga tarjumaan ku tacadiyaan, kulana heshiiyaan dhaqaatiirta lacago dul-saar ah, oo inta badan dadka bukaanada ah aysan xamili karin.
Magaalada Hyderbad ayaa ka mid ah magaalooyinka ay tagaan dadka caafimaad raadiska ah, waxaadna ku arkeysaa xaafada Soomaalida iyo qaar ka mid ah isbitaalada magaaladaasi dad jilicsan oo xaalad caafimaad darri la daalaa-dhacaya, ayna u sii dheer-tahay in ay ka ashtakoonayaan qof u soo raacay inuu dhaqaatiirta ugu tarjumo.
“Ma doonayo inaan meel uga dhaco magaca dhalinyaradaasi Soomaaliyeed oo dhan, balse waxaa qasab ah in la tilmaamo in ay jiraan kuwo badan oo dhalinyaradaas ka mid ah oo dadka furta” Sidaas waxaa yiri Cali Xassan oo ka mid ah dadka baaritaanada caafimaad u yimid Hyderbad, isaga oo intaasi raaciyey inay tahay wax wanaagsan in dadka la gaarsiiyo farriintan.
“Caafimaadka ILLAAHEEY baa haya, Hindiya waxeey noqotay dal ay caafimaad u raadsadaan Soomaali fara badan; dadkaasi waxaa u badan dad jilicsan, marka halkaasi tagaan waxeey u baahdaan dadka caawiya oo dhaqtarka kaga tarjuma, dhalinyaradu waa in ay iska qabtaan dadka magacooda xumeynaya, ee furanaya dadka masaakiinta ah ee caafimaadka halkan u soo raadsada” Ayuu yiri Cali.
Ku soo hagaaji fikirkaaga: yoobsannews@gmail.com
Previous: Xaalad CUSUB oo ku soo korortay Isgoys-yada Muqdisho
Next: Dad shicib ah oo ku dhintay rasaas ay fureen ciidamada AMISOM